Xisbiga Vänsterpartiet (V) oo soo saaray go’aan macno daro ah oo Soomaalidu dhabar jab ku ah | shumis.net
Home » News » Xisbiga Vänsterpartiet (V) oo soo saaray go’aan macno daro ah oo Soomaalidu dhabar jab ku ah
Sidii aan dhowr jeer soo qornay isbuucaan Soomaalida Sweden ayaa aad uga gilgilatay ka dib markii xildhibaanad ka tirsan xisbiga Bidixda ee Vänsterpartiet (V) ay dacaayad cunsuriyad ah ka faafisay Soomaalida. Dalabka Soomaalida ayaa ahaa in haweeneydaan laga ceyriyo xisbiga.
Balse xisbiga ayaa arintaas u muuqda kuwo dhagaha ka furaystay isla markaana aan qiimeyneyn dalabka Soomaalida. Isbuucii hore ayaa xogyaha guud ee xisbiga waxa uu soo saaray baaq ku socda haweeneydaan oo uu ku dalbaday in ay muddo siyaasada ka fariisato, balse ka dib kulan dhexmaray isaga iyo xildhibaanada ayay go’aan ku gaareen in ay muddo 1 bil aysan ka nasato arimaha siyaasada ee saxaafada laga dheehan karo.
Go’aankaas ayaa ah mid macno daro ah isla markaana aflagaado ku ah Soomaalida oo doonaysay in haweeneydaan la cinqaabo. Tani ayaa muujinaysa in xisbiga Vänsterpartiet uusan qiimeyneyn codka Soomaalida isla markaana aysan Soomaalida u arag in ay yihiin bulsho muhiim u ah.
Dhinaca kale, shalay waxaa warqad ay soo qoreen ururo iyo dad u badan Kurdiyiin Shiicada ah ay soo saareen warqad taageero ah oo ay u fidinayaan xildhaanadaan iyagoo xisbiga ugu baaqay in aysan Amineh wax talaabo ah ka qaadin. Arinta yaabka leh ayaa ah in dadkaasi ay ku jiraan ururka dumarka Eritrea oo u muuqdo kuwo aan waxba la socon. Waxay sidoo kale warqadooda ku tibaaxeen in Amineh ay weerar ku hayaan dad Muslimiin xagjir ah oo dumarka neceb (taasoo loola jeedo Soomaalida??).
Hadaba Soomaalida Sweden waxaa la gudboon in ay dadaalkooda sii wadaan isla markaana kuwo xubnaha ka ah xisbiga V ay meel cad uga soo jeestaan arintaan isla markaana ay isaga baxaan xisbiga haddii aysan talaabo wax ku ool ah ka qaadin haweeneydaan. Arintaan haddii guul laga gaaro ama lagu fashilmo waxay tijaabo u tahay tayadda codka Soomaalida Sweden.
Title: Xisbiga Vänsterpartiet (V) oo soo saaray go’aan macno daro ah oo Soomaalidu dhabar jab ku ah
Posted by galmada Net, Published at May 04, 2016 and have 0 comments